Askari rasaaseeyay gaari Meyd siday Muqdisho,, – Qardho Online
Askari rasaaseeyay gaari Meyd siday Muqdisho,,
August 23, 2018 Sharmaarke Hiiraan Wararka 0
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya wadada Warshadaha ee magaalada Muqdisho, askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa rasaas ku furay mid ka mid ah kolonyo gaadiid ah oo siday Meyd.
Askariga rasaasta ku furay gaariga ayaa ku sugnaa Bar-kontorool oo ku taalla agagaarka Warshaadda Taraqa iyo Sigaarka ee magaalada Muqdisho, waxayna amuurtan ka dambeysay kadib markii ay murmeen dadkii la socday meydka iyo ciidankii halkaasi joogay.
Intaasi kadib askari ka mid ahaa ciidamada ayaa rasaas ku furay gaari Ambulance ah oo lagu siday marxuumka la soo aasi rabay oo lagu magacaabi jiray Dhaqane Muxumed Aadan.
Dad la socday gaadiidka lagu waday meydka ayaa waxa ay sheegeen rasaasta uu furay askariga inuu ku dhaawacmay Axmed-nuur Xasan Xuseen oo markii dambe mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho ugu geeriyooday dhaawicii soo gaaray.
Kiiska lagu dilay Axmed-nuur ayaa waxaa lagu wargeliyay xarunta dambi baarista ee CID-da, wuxuuna ahaa nin xoogiisa ku shaqeysta, islamarkaana uu ahaa 30 sano jir, sida ay inoo sheegeen qaar ka tirsan eheladiisa.
Magaca iyo Calanka Dowlad deegaan somalida oo la bedelay,,
magacyada: Xujey Soomaaliyeed oo ku geeriyootay magaalada Mina,,